Offshore Banking - Nzira Yokuzarura Nayo Best Account Kwako
Offshore Banking Guide | Nzira yekuzarura sei Best Account
Offshore banking zvinosanganisira kuvhura account yekubhangi kunze kwenyika inogara mumwe. Vanhu vanovhura account idzi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Izvi zvinosanganisira kuchengetedza midziyo yavo kubva kumatare edzimhosva, vakweretesi uye kutonga, pamwe nekuchengetedza mutero uye kuwedzera bhizinesi. Isu tinogara tichivandudza chinyorwa ichi. Donzvo redu nderekukupa iyo yakanakira nzira yekukurukura kuti ungaitei, kupi uye nei kuenda kuvhura bhangi yebhishopu yekunze. Isu tinokurukura zvakare mitemo, tsanangudzo uye zvinoreva. Tichazoongorora zvakakosha kune ruzivo rwepamberi mune free online book uchaona pazasi.
Zvemabhangi masevhisi kumadokero epasi ane chimiro chisina kunaka. Ichokwadi. Hezvinoi Global Finance inodaro, sokunyora uku, kwemabhangi akachengetedzeka e30 munyika. hapana dzaive muUnited States. Zero. Kunze kweiyo yepamusoro 50, chete shanu masangano ezvemari aive mune US. Zvakare, mana emashanu mashanu emabhangi eUS ari pane mazita anongori madiki edunhu ekurima emabhangi. Paive nematanhatu eAAA yakavharwa offshore banks. Pakati pavatanhatu, hapana dzaive kuUS.
Offshore Banking: Nongedzo Yakazara.
USA: Mudenga muDhaka
Funga nezvazvo. USA ndiyo inonyanya kukwereta-chikwereti munyika. Hakuna imwe nyika inoswedera. Kune ina ina nyika ine chikwereti chikuru kwazvo chenyika, iyo US yakawedzera kaviri chikwereti cheuviri UK uye inosvika katatu nehafu zvakapetwa kupfuura nhamba nhatu neChina France neGerman.
Saka, chirevo chekuvhura chiri pamusoro hachisi chimwe chekutarisa-kuwana musoro. Ichokwadi chakachena chakavakirwa pauchapupu hwakasimba. Zvakare, kwete kare kare iyo US yaive neayo chikwereti chiyero chakaderedzwa neVatema & Varombo, inoremekedzwa zvakanyanya kambani uye yehurumende chikwereti muyero kambani munyika. Vanhu veku US havana mitemo munyika dzayo dzinorambidza kubhengi rekune dzimwe nyika. Nekudaro, kutanga Zvichakadaro, tapota ona mutungamiri pasi apa.
New kuti offshore accounts? Unoda kuvhara kunzwisisa kwako? Unoda kuvhura account kunze kwenyika? Gwara riri pazasi chidzidzo. Inopa ruzivo rwakakwana kune zvese kutanga uye kusimbisa ruzivo rwako.
Chitsauko 1: Offshore Bank Account: Chii ichochi? Nei Uine Imwe?
- Yakadzama Ruzivo, Matipi uye Sei To
Chitsauko 2: The 5 Zvikonzero Zvakanyanya Kuvhura Akaundi Yepa Offshore Bank - Kuibikira pasi
Chitsauko 3:International Banking Information
Chitsauko 4: ngano
Chitsauko 5: Kudzivirirwa & Kuchengetedzwa
Chitsauko 6: Asset Protection
Chitsauko 7: 6 Best Countries- An Offshore Bank Nyaya yemitemo
Chitsauko 8: Offshore Akaundi Setup - Zvaunofanira Kuita
Chitsauko 9: Credit Card Merchant Accounts
Chitsauko 10: mari
Chitsauko 11: Zvinorayirwa Masimba
Chitsauko 12: Swiss Banking
Bhonasi Chitsauko: Bitcoin uye imwe Cryptocurrency
Dambudziko rekubhadharira US
Ngatinyanyofunga nezveUnited States banking system.
Mamwe evaimbove emabhangi emabhangi muUS haayerengi kusvika pamazinga ekuchengetedza bhangi. Bank of America Corporation, semuenzaniso, yakaziviswa nguva pfupi yapfuura kuti haina kupfuura iyo bvunzo yekunetseka. Muedzo uyu wakagumisa kuti bhanga iri raive $ 33.9 mabhiriyoni emadhora madhora mashoma pane huwandu hwezvitoro zvavaida kuchengetedza mamwe makore maviri ehupfumi hwakatambura.
Kunyangwe iyo agency inofanirwa kuchengetedza mabhangi eUS, iyo FDIC pachayo, ipfupi. Ivo havana huwandu hwemari iyo mutemo inoda kuti huve nahwo kuitira kuti inishuwarenzi US bank bank system.
Zvakare, iyo US Federal Reserve iri kusvetukira pane yakaonda ice. Iyo capital ratio iyo inobata ndeye paltry 1.24%. Funga nezvazvo. Lehman Brothers yaive ku3% payakanyorera kubhuroka.
Muongororo ichangobva kuitika, pakanga paine $ 50.7 trillion yechikwereti icho chaive chikwereti nedzimba dzeUS, mabhizinesi pamwe nehurumende. Izvi zvinomiririra inosimudza 3.5 nguva yehuwandu hwegore rose hwegorosi yezvigadzirwa zveUnited States.
Banking System mu Trouble
Naizvozvo zviri pachena kuti US ine mari yakanyanya kubhuroka yekubhengi inotsigirwa neinhurume inishuwarenzi yakarasikirwa nesangano inotsigirwa nemweya wakashata mu-chikwereti hurumende bureaucracy, inotsigirwa nevanobhadhara chikwereti. Saka, hatifanire kubvunza, "Kubhuroka kwemahombekombe kwakachengeteka here?" Panzvimbo iyoyo, tinofanira kubvunza, "Kubhengi reUS kwakachengeteka here?"
Tinogona kuona zvakajeka, zvakare, kuti izvi hazvisi kungofanana chete. Icho chakasimba chokwadi chinobva pane chokwadi mushure mezvokwadi. Zvechokwadi, zvinotyisa kukuvadza kuziva kuti igare sedombo mubako remudumbu.
Takaona vabereki vedu vachienda kubhangi, vachiisa mari yavo yavakawana zvakaoma mumabhangi, tichitenda mabhangi akachengeteka. Ehe zvakachengeteka, tinogona kufunga. Iri kubhengi, shure kwezvose.
Nekudaro, kutarisa nhamba dziri pawebhusaiti yeFDIC, kubva pa2000 kusvika pakutanga kwe2018, 555 US mabhangi akakundikana. Hongu, 555. Ramba uchifunga kuti iyo FDIC haimanikidzi depositi kune ese account account. Ivo vanongofukidza yekutanga $ 250,000. Chinhu chero chipi zvacho chiri pamusoro pehuwandu icho chinogona kuenda "poof" kune mweya mutete apo bhangi rako rakakundikana.
Yeuka zviitiko zvinotyisa zvakaguma mudambudziko re Washington Mutual Bank? Uyu ndiye rakakura kubhengi kusakwanisa muAmerica. Rimwe zuva vanoisa mari vakafunga kuti zvinhu zvose zvakanaka. Mangwanani akatevera, vakamuka uye vakaona kuti bhanga ravo rakanga risisipo.
Iyi ndiyo nzira yazviri nhasi. Zvinogona kunge zvichipesana nekutenda zvakaiswa matiri pazera diki. Asi isu tese tinoda kumutsa kune chaicho chitsva.
Blaring Facts Kutungamira kune Offshore Banking
Kana tatarisana nezvakajeka izvi zvinotisundira pasi kuchisarudzo chitsva. Kana zvese zvakakura masangano emari vakapererwa, vanopokana kana chokwadi chechokwadi chichijekeswa pachokwadi ichi. Iwe haufungi kuti zvine musoro here kubata kanenge muzana muzana wemari yako kunze kwenyika munzvimbo dzakachengetedzeka?
Ndaizofunga saizvozvo. Ndinokukurudzira kuti utore chiito chekugadzira nhoroondo yepasi rose nekukurumidza. Shandisai nhamba yenhare or zadza fomu pane peji ino. Takabatsira zviuru nezviyero zvebhangi. Uyezve, tanga tichibatsira vanhu kuchengetedza zvinhu zvavo kubvira 1906.
Nzira Yokusarudza Nharaunda
Kwave kuri kuchenjera kufunga nezve hutongi mumamiriro emari akanaka, nehurumende dzerunyararo uye nekureba maindasitiri ebasa rezvemari. Zvinoitwa nevanhu uye nematare edzimhosva zvakanyanyisa kukosha pane zvavanotaura. Saka, kana vaine mukurumbira wekugadzikana kwemari, izvo zvinofamba nzira refu mukutora nzvimbo yako yemari.
Ndezvipi Ichokwadi Chaizvo Zvose?
Ramba uchiyeuka kuti kuchengetedza mari yako kumhenderekedzo yekutenga hakusi nezvekuvhara mutero wemitero mumatunhu emitero akadai seCayman Islands kana Hong Kong. Icho chiri chokuita nekusiyana kwezvinhu. The Hurumende yeUnited States, somuenzaniso, haina hanya kana iwe uine mari kune imwe nzvimbo chero bedzi iwe uchitaura zvaunowana. Kuisa mari kumhenderekedzo ndeyekuti, uye nehombe, mutero-usina kwaunoita. Saka, hazviwanzo kuwedzera kana kuderedza mitero yako. Mamiriyoni evanhu vane zvikwata zvepamusoro uye hazvikanda mapepa matsvuku kune vane hurumende kana iwe uine imwe, zvakare.
Nekuuya kwe online banking, online wiring kugona, kuridza runhare kubhengi uye makadhi ekubhengi, kubhengi kumahombekombe hakusi kwakasiyana kwazvo nekubhengi pasi mumugwagwa. Uyezve, zvakajairika kuwana kuwana mabhangi anopa mhindu yemari yakakwira, kazhinji yakakwira, kupfuura izvo zvinobhadharwa nemabhangi emuno.
Funga nezvangut. Mari muUS yakakwira kwazvo kana ichienzaniswa nedzimwe nyika. Real estate mitengo yakakwira. Mitero yakakwira. Mushandi inishuwarenzi yekurapa iri kuburikidza nedenga. Idzo mari dzinotora chunk hombe yebhangi purofiti muUS, UK, Canada and dzimwe nyika dzakakwirisa mitengo. Kana mari yekubhadhara kwemahombekombe ishoma, kuchasara nezvimwe zvakawanda zvakasara zvekubhadhara iwe, depositor yavo.
Sei mabhanhire eSouth America akavanza zvinhu
Yako bhangi remunharaunda zviri pachena kuti harisi kuzotora kushambadza TV ichikuudza kuti iwe unogona kuwana yakawanda mubereko zvirinani chiyero. Mabhangi ekunze, asina marezinesi emabhangi emumba, haakwanise kushambadza zviri pamutemo imomo. Saka zvimwe waizoziva sei? Ivo havasi kuzokuudza izvo mabanza emahombekombe ane simba pane bhangi pasi pemugwagwa.
Mabhenji Anosimba Zvikuru Kwazvo
Switzerland, Germany, Australia, Singapore, Hong Kong nedzimwe nyika dzakawanda dzine mabhangi mazhinji akasimba. Yako zvechokwadi ine mukati kati scoop, yakavakirwa pamakumi emakore echiitiko, pane izvo nzvimbo dzekunze dzemabhangi ichavhura maakaundi evatorwa, vape mari yekusimudzira, vane hushamwari mune zvemari, vane masevhisi ari nyore, uye vanonakidzwa chaizvo kushanda nawo.
Ndiyo Mari Yako - Gamuchira Rubatsiro
Zvakakosha zvakanyanya kuve nhungamiro yemumwe munhu ane ruzivo mukumisikidza maakaundi kumahombekombe. Chero bhangi inogona kuzviita kuti vatarise vakanaka. Asi chete munhu ane ruzivo - uye isu tamisa zviuru zve account offshore - anogona kukuudza iwe ndedzipi dzinonyatsobata avo vanogadzirisa zvakanaka. Mushure mezvose, tiri kutaura nezvemari yako pano. Chokwadi, zvinogona kudhura zvishoma. Pamwe zvakaderera pane zvaunofunga. Asi zviri nani pane inoparadza imwe sarudzo yekusarudza iro bhanga risiri iro.
Offshore bank account varidzi havagone kushambadza zviri pamutemo onshore. Zvakare, mabhangi epamba makuru vanopa ezvematongerwo enyika. Nekudaro, pane mubatanidzwa wekushayikwa kwemashoko uye chokwadi chakashata chakatenderedzwa nezvacho pemvura nhoroondo. Somugumisiro, vamwe vanhu vane mafungiro enhema kuti hazvibvumirwe nemutemo - izvo chaizvoizvo hazviiti. Vamwe vanofunga kuti iyo inzira yekudzivisa mitero - haisi. Vamwe vanofunga kuti mhombwe vanoishandisa zvikuru - izvi hazviwanzoitiki nokuti bhangi inogona kurasikirwa neisensi yekubvuma mari isina kuchena.
Ichokwadi ndechekuti, kana iwe uri weU.S. kana UK, semuenzaniso, kuti chero bedzi iwe uchizotaurira mari yako yepasi rose, hurumende inogona kutarisira zvishoma. Tarisa uone kuti kune mabhirioni emadhora ari kubhururuka achidzoka kumiganhu yedu gore rega rega. Nekudaro, yako account haingaite ripple pane federal radar.
Pane zvimwe zvinoshamisa zvingasarudzwa kune mumwe munhu anotsvaga iyo yekubhangi rekunze account. Pane pemvura mabhengi hunyanzvi mukati Asset kudzivirira kubva kumatare. Mamwe mabhanga anotambira kune avo vanoda yakakwira-vhoriyamu bhizinesi ekutengesa maakaunzi. Vamwe vanokoshesa Kutarisira mari yevanotengesa mari. Kune mamwe mabhanga anotsvedza yakadhura mari yekutengeserana yevanozviitira iwe vatengesi. Zvimwe zvinoda mari shoma, senge $ 2000 US. Vamwe vanogamuchira net yakakwira yakakosha vanhu uye inoda madhipatimendi akakosha, pakuvhura account yekubhangi, ye $ 250,000 US kana kupfuura.
Vamwe vanobhadhara zvikwereti zvinodarika zvepamusoro kune mabhengi emisha, nekuda kwekuderedza mari dzinodhura. Vamwe vanobhadhara mitero yakaenzana neyemisika yemisika. Dzimwe hurumende dzakasununguka, dzakadai seCook Islands, hazvizivikanise kutonga kune dzimwe nyika. Saka, kana yakabatanidzwa nekutengeswa kwekunze kwekunze, inopa avo vanotsvaka kuchengetedzwa kwenyika.
Kana kumisikidza maakaundi ebhengi ekunze, inofanirwa kushingaira uye inoziva-yako mutengi mirairo ndeyepasirese. Masisitimu ebhengi ayo anotendera maakaundi ekunze ekubhangi ane chikwereti pamusoro pekugamuchira vatorwa vari kutsvaga kubviswa kwemutero kubva kudzimba dzekumba kwavo. Vachatarawo kuongorora kwako kuita shuwa kuti uve nechokwadi chekuti rako raanowana mari riri pamutemo. Nekudaro, kana iwe uchida kuvhura account yekubhanga rekunze, gadzirira. Ivo vachazoda kuti iwe upe kuburitswa zvizere nezvezita rako uye kuti dhata yako yakabva kupi.
Offshore Banking kure neIndaneti
Mabhanga ese anoda kuti iwe upe chitupa chakakodzera. Mamwe mabhanga anokubvumidza iwe kuti ugovera zvinyorwa kana tsamba. Vamwe vanoda kuti iwe uratidze pachako. Nekuda kwehukama hwedu nemabhangi mazhinji pasi rese, isu tiri "inotanga kukodzera”Saka isu tinokwanisa vhura account kune vatengi vari kure uko vanhu vasingakwanise kuzviitira ivo. Zvakare, ruzhinji rwemabhangi emahombekombe haatombovhura maakaundi eUS kana vanhu veCanada. Isu tinoziva idzo dzinozovhura account yevatorwa, uye pasina kukosha kwekufamba. Shandisa fomu iri papeji ino kana nhamba iri pamusoro kuti uwane imwe mhinduro kumibvunzo nezve kubhengi kunharaunda.